सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई ठाडै कारबाही गर्छौंः मन्त्री अर्याल (अन्तर्वार्ता) – SajhaPana
साझा पाना २०७६ वैशाख २ गते ०३:५४ मा प्रकाशित
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल नेत्री हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल । अध्यक्ष कार्यकारी हुने व्यवस्था भएपछि पार्टीको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुने उहाँ एकमात्र पहिलो महिला नेतृ हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो भने गत साउनदेखि उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि पत्रकार सविता शर्माले गर्नुभएको कुराकानी :
– नीतिगत कामलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । खास गरेर भूमि व्यवस्थासँग जोडिएका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेर नीतिगत केही कामहरू गर्नै पर्नेछ । भूमि ऐन संशोधन नगरेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन । हिजोको कानूनले अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा अहिलेको समस्या सम्बोधन हुने गरी कानून र नीतिको तर्जुमा र संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हौँ ।
तत्कालचाहिँ भूमि ऐन र भूउपयोग नीति बनाउनमा बढी केन्द्रित भएका छौँ । त्यसैगरी संविधानको मौलिक हकमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने कानून निर्माण र समग्र भूमि व्यवस्थालाई व्यवस्थित र यससँग जोडिएका समस्याको समाधानका निम्ति कुन हिसाबबाट जान सकिन्छ भनेर छलफलको क्रममा छौँ । गरिबी ऐन बनाउनुप¥यो, मन्त्रालयसँग सहकारी जोडिएकोले सहकारी नियमावली बनाउँदैछौं । सहकारी ऐन त आयो त्यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन् त्यसलाई समाधान हुने गरी नियमावली बनाउनुप¥यो । सहकारीहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि कसरी परिचालन गर्ने ? सहकारीलाई मार्गनिर्देश गर्ने खालको नियमावली बनाउँदैछौँ ।
घर/घडेरीको नाममा उत्पादनमूलक जग्गा खण्डीकरण सकिन लागे उत्पादनमूलक जग्गाको चकलाबन्दी गर्ने कुरा पनि उठेको थियो, त्यो कहाँ अड्केको छ ?
– अहिले हामी भूउपयोगको नीति बनाउँदैछौं । यो नीतिअन्तर्गत जमिनको वर्गीकरण गरिन्छ । विकास गर्ने हो भने हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले भूमिको वर्गीकरण गर्नैपर्छ । केही समय लाग्ला तर यसका लागि पुनः नापी पनि गर्नुपर्छ । भूउपयोगको नीतिलाई राम्रोसँग लागू गर्ने हो भने चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिबाट हाम्रो आवास क्षेत्र कुन हो ? खेतीयोग्य क्षेत्र कुन हो ? आद्यौगिक क्षेत्र कुन हो ? हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र कुन हो ? हाम्रो खोला र वन क्षेत्र कुन हो ? हामीले छुट्याउन खोजेको हौं ।
सरकारले भूउपयोगको नीति बनाएर खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नदिन तराईमा चक्लाबन्दी गर्न आवश्यक छ । चक्लाबन्दी गरियो भने बस्ती पनि त्यहीअनुसार बस्छ । खेतीयोग्य जमिन पनि छुट्टिन्छ औद्योगिक क्षेत्र पनि छुट्टिन्छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाएर जग्गाको कित्ताकाटका लागि पनि भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय कम्पनीहरूले मात्र गर्न पाउने बनाउन छलफलमा छौं ।
– मकहाँ पनि गुनासो आएको छ । यहाँबाट त को धनी को गरिब हामीले देख्दैनौं नि । देख्ने भनेको मन्त्रालयले बनाएको फम्र्याटमा हो, जे भो त्यही आधारमा मन्त्रालयले यो गरिब हो कि होइन भनेर छुट्याउने हो । हिजो कसैले बेइमानी ग¥यो त्यसैले धनी पनि गरिबको सूचीमा देखिए । स्थानीय तहले यो गरिब होइन गरिबको सूचीमा आयो भनेर प्रमाणसहित लेखेर पठाएपछि ठाडै खारेज गरिदिन्छौं । लक्ष्यित समूहले प्रयोग गर्नुपर्छ अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैन । पहिचान गरेका ठाउँहरूमा गरिबी निवारणका निम्ति सहकारी मोडेलमा जहाँ जे सम्भावना छ त्यो अनुसार पाइलट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौंं ।
–नेपालको नक्सा छाप्ने अधिकार हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागलाई मात्रै छ । नापी विभागले छापेर प्रमाणित गरेको नक्सा मात्रै आधिकारिक नक्सा हो । अहिले नक्सा भारतलगायत अन्यत्र पनि छापिन्छ । दोस्रो कुरा अन्त छापिएका नक्सा गुगलमा छ । गुगलबाट झिक्ने प्रयोग गर्ने गर्दा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण नक्साको प्रयोग भएको हो । नापी विभागले छापेको र प्रमाणित गरेको नक्सा त्रुटिपूर्ण छैन । जति पनि त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग गरिएको छ ती प्रयोग गरिएका त्रुटिपूर्ण नक्सा हटाउने अभियानमा हामी छौं । त्यो खालको निर्देशन हामीले सरकारी कार्यालयमा गरिसकेका छौं । अब हामी आधिकारिक नक्सा स्थापित गर्नको निम्ति नापी विभागबाट ठूलो सङ्ख्यामा नक्सा छपाउँदैछौं । सबै सरकारी कार्यालयमा नापी विभागबाट छापिएका नक्सा पठाउँछौं र आधिकारिक नक्सालाई स्थापित गर्छौं ।
– भूउपयोगअन्तर्गत सिमानादेखि लिएर अन्य सबै खालको र हिजो छुट भएकाहरू पनि नापनक्सा गरिन्छ । हाम्रो आवश्यकता पुनः नापी हो । पटक÷पटक नापी भएकोले कसैको जग्गा मिल्दैन, कसैको नक्सा मिल्दैन, धेरै समस्या देखिएको छ । अनेक खालको समस्या आएको छ । तराईतिर खोलालाई सिमाना मानिएको थियो यसले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । यो सबैलाई सम्बोधन गर्न खोज्दैंछौं ।
स्याटेलाइट इमेज खिच्नका लागि चिन सरकारसँग सहयोग लिएर त्यसको निशुल्क प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । गाउँपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, भूिम व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालयले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि शुल्क तिरिरहनु पर्दैन । पहिले बेग्ला बेग्लै शुल्क तिर्नुपथ्र्यो, यसबाट राज्यलाई अरबौ फाइदा पुग्नेछ । नापी विभागमार्फत प्रदेश, पालिका, खोला, सबैको नापनक्सा गर्ने परियोजना हो । पहिलेको जग्गा धनीपूर्जा निकै क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । त्यो त जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गरेर संरक्षण गर्ने काममा पनि लागेका छौं ।
– हामी छलफलमा छौं, जमिन बाँझो राख्न नपाउने भन्ने गरी गयौं भने उत्पादन पनि हुन्छ । उत्पादनसँग समृिद्ध जोडिन्छ । उत्पानमूलक कामै नगर्ने, जमिन बाँझै राख्ने र समृद्धिको भाषण मात्रै गरेर त समृद्ध भइदैन । जे भने पनि हाम्रो मुलुकको मुख्य आधार कृषि नै हो । हामी सामूहिकता र सहकारीतामा गएर उत्पादनमा लाग्यौं भने बजार हामीलाई खोज्न आउँछ । कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेर बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी हामी अगाडि जाँदैछौं । गोरखापत्र दैनिकबाट साभार ।
ट्याग : #जग्गा अतिक्रमण